Wasiirka Amniga Soomaaliya oo sheegay in 54 maleeshiyo Al-Shabaab ah ay isa soo dhiibeen tan iyo 14-kii Oktoobar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka Amniga Soomaaliya oo sheegay in 54 maleeshiyo Al-Shabaab ah ay isa soo dhiibeen tan iyo 14-kii Oktoobar
December 3, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Konton iyo afar maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa dowladda Soomaaliya isku soo dhiibay tan iyo qaraxii Muqdisho ee bishii lasoo dhaafay, sida uu sheegay wasiir dowladda katirsan.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shalay oo Sabti ahayd sheegay in 54 maleeshiyo Al-Shabaab ah ay dowladda isku soo dhiibeen. Wasiirka ayaa sheegay in dowladdu ay sameysay xarumo lagu dhaqanceliyo dagaalyahanada isa soo dhiiba, xarumahaas oo laga sameeyay magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Beledweyne.
Qaraxii Muqdisho ka dhacay 14-kii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar, ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 500 qof, waxaana uu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa taariikhda Soomaaliya.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Puntland iyo Galmudug ayaa isku afgartay in ay ka wada shaqeeyaan arrimaha ammaanka, dib u sheesiinta, iyo xoojinta siyaasadda iyo dhaqaalaha, kadib kulan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maanta oo Jimce ah. [...]